सानी अनिता थापाको अग्ला भोगाईहरु ! - Sajha Entertainment
Home/अन्य no use/सानी अनिता थापाको अग्ला भोगाईहरु !
Sajha Entertainment Send an email २८ असार २०७४, बुधबार १३:२८
जीवन के हो? प्रकृतीले दिएको अनुपम वरदान ? अनि सुन्दर अनुहार, मिलेको शरीर,मिठो बोली जस्ता शारीरीक सवलता ले जीवनको सफलतालाई कतिको फरक पार्छ ? जवाफ शायद सबैबाट एउटै आउँला – “फरक पार्दैन मन राम्रो चाहीन्छ, शारीरिक सुन्दरता एउटा भ्रम न हो !!” । तर जतिसुकै आदर्शको भाषण सुनिएपनी समाजको यथार्थ भने भिन्दै छ । शिक्षा र चेतनाको स्तर अहिले निकै बढे पनि अझै पनि कालो वर्णको मनिसलाई देख्ता “अोई काले !! ” अनी होचो मान्छेलाई देख्ता “अोई पुँड्के!,डेड् फुट्टे !!” भनी गिज्याउने चलन हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । अनी उनिहरुलाई परेको मानसिक, समाजीक र पिडाको अनुभुती त् उनिहरुमा नै लुक्छ । उनिहरुका अाफ्ना भावना लुक्छ्न् , चाहना लुक्छ्न् ,हिम्मत दबिन्छन्, समाजीक रुपमा पछी पर्छन r शायद सपनाहरु पनि धुजा धुजा हुन्छन् । तर यी सब चल्दै आएको चलन अनी समस्याहरु भन्दा माथि उठेर आफ्नो पृथक पहिचान बनाउन सफल भएकी छिन् – “चटपटे दिदी !!”
अनिता थापा आँफैले अभिनय गरेको फ्लीमको गीत आँफै गाउँदै
कदमा सानी , ओठमा मन्द मुस्कान बोकी सबै सँग मिलनसार भई कुरा गर्ने चटपटे दिदीको वास्तवीक नाम चाहीँ निता थापा हो । निजगढ घर भएकी उनी विगत ४ महिना देखी काठमाण्डौँ, बाफलको सडक पेटीमा चटपटे व्यवसायमा गर्दै आएकी छिन् । चटपटे व्यवसायको यती सानो अवधीमा नै उनी त्यस ठाउँका मानीसहरु बिच निकै लोकप्रिय छिन् । “यती सानो अवधीमा नै यस्तो लोकप्रीय कसरी हुनुभयो ? कतै तपाईंको सानो कदले मात्र त होईन ? ” भन्ने प्रश्न मा उनी भन्छीन् “शायद हुन सक्छ, तर म मेरो ग्राहहरुलाई सकेसम्म स्तरीय , मिठो र सस्तो मुल्यमा चट्पटे खुवाउने प्रयास गर्छु । ” हुन पनि उनको चटपटे भनेपछी मानिसहरु हुरुक्कै हुने रहेछन् । “मलाई त दिदीकोमा बाहेक अन्त कतै जान मन लाग्दैन, याँ अरुकोमा भन्दा मिठो हुन्छ, धेरै पनि दिनुहुन्छ ” भर्खर स्कुलबाट घर आएर चट्पटे खान तम्तायर सानी नानी भन्दै थीइन् । उनको मिजासीलो व्यवहार र् चटपटेको सबैजना फ्यान रहेछन् ।
"Direct नेपाल आइडल छिराईदिन्छु "भनेर प्रस्ताव आएको थियो !